FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY ALIKA GOLDEN COCKER RETRIEVER - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny alika Golden Cocker Retriever
Alika Cocker Spaniel / Golden Retriever mifangaro
Cocker Spaniel / Golden Retriever hybrid (Golden Cocker Retriever) 'Zoe dia hybrid Cocker Spaniel / Golden Retriever 7 taona. Alika be fitiavana izy ary mbola milalao ihany. Tena hendry izy! Afaka mipetraka izy, mihozongozona, mandry, mihorona ary mangataka. Zoe tia milalao fakana! Izy dia tsara miaraka amin'ny olona sy ny ankizy rehetra, na lehibe na kely. Tia biby hafa izy. Izy no alika tsara indrindra nananako! Sahabo ho 17 'ny halavany ary 22' hatramin'ny hatoka ka hatramin'ny rambony. Milanja 40 pounds eo ho eo izy izao rehefa natsoaka. Talohan'ny nandresena azy dia nilanja 33 kilao izy. Tsara tarehy izy!'
Ny alika Golden Cocker Retriever dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Golden Retriever ary ny Cocker Spaniel . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
Club American Hybrid Canine Amerikanina = Retriever Golden Cocker
Designer Dogs Kennel Club = Golden Cocker Retriever
Mpanoratra International Canine Registry®= American Cocker Spaniel x Golden Retriever = Golden Cocker Retriever
Mpanoratra International Canine Registry®= Anglisy Cocker Spaniel x Golden Retriever = English Comfort Golden
'Rusty ity. Noraisinay tamin'ny olona tsy nikarakara azy fatratra izy. 2 taona sy sasany izy amin'ity sary ity ary mifangaro Golden Retriever / Cocker Spaniel. Ity alika ity dia MAHAVARIANA mpanao fanatanjahan-tena ary afaka mihazakazaka tsy mijanona mandritra ny fotoana lava ary manana tongotra mahery any aoriana hitsambikinana. Tsy manana ny fahaizany milomano toa an'i Golden Retriever 8 taona, Rosie izy. Izy no alika tsara indrindra azonao angatahina, miankina foana izy milalao , tsy manaikitra mihitsy , tia mitendry amin'ny alika hafa , ary te-hivoaka ivelan'ny trano foana. Alika mianakavy tsara! '
'Ity dia Cookie amin'ny faha-7 volana. Tiany ny mandeha manjono sy milomano. Rehefa avoakako ho any am-pilalaovana izy dia hiantso ahy izy rehefa vonona ny hiditra amin'ny fitenenana hoe 'mama.' Tiany ny maka ny baoliny ary wubba fa mankahala ny Frisbee. '
antsasaky ny volamena retriever antsasaky ny akoho spaniel
Callie the Golden Cocker Retriever, antsoin'ny mpiompy azy hoe 'Dakota Sport Retriever', toy ny alika kely amin'ny 4 volana — 50% izy Golden Retriever , 25% Cocker Amerikanina ary 25% English Cocker . 'Callie dia taranaka volamena maivana, Golden Cocker Retriever - midika fa ny ray aman-dreniny dia efa nifangaro tamin'ny Cocker Spaniel sy Golden Retriever. Manana Cocker Spaniel Anglisy ao aminy koa izy. Izy dia alika kely mahafatifaty, hendry ary milalao. Mpiara-milalao mahay miaraka amin'ny zanako vavy 2½ taona izy ary ny zanako vavikely tia azy koa. Tiany ny mitondra kitay rehefa milalao any ivelany izy ary mankafy mitsangatsangana . Afa-po matory ao amin'ny trano fatoriany alika anaty alina izy amin'ny alina. Nandeha nihazakazaka nanao hazakazaka nandritry ny ora adiny iray voalohany izy ny andro hafa, ary nanao fahagagana. Tsy azoko an-tsaina ny biby fiompin'ny fianakaviana tsaratsara kokoa! ' Notontosain'ny Dakota Winds Ranch
Callie the Golden Cocker Retriever, izay antsoin'ny mpiompy azy hoe 'Dakota Sport Retriever', toy ny alika kely amin'ny 9 herinandro — 50% izy Golden Retriever , 25% Cocker Amerikanina ary 25% English Cocker . Notontosain'ny Dakota Winds Ranch.
Tigra, lehilahy mainty hoditra Dakota Sport Retriever, an'i BB Acres— 'Dakota Sport Retrievers dia namboarina tamin'ny fampiasana 50% Golden Retriever , miaraka amin'ny 50% hafa Spaniel Cocker amerikana sy anglisy amin'izy ireo dia 25% isaky ny karazany. Na izany aza, mety manana 37,5% amin'ny English na American Cocker Spaniel ao amin'izy ireo izy ireo, miaraka amin'ny 12.5% ​​hafa. '
sarin'ny alika lhasa apsos
Primo the Golden Cocker Retriever amin'ny faha-3 taonany—? 'Primo dia mitovy amin'ny Golden Retriever purebred izay mipetraka eo akaikiny, kely kokoa noho izy kely fotsiny. Izy dia nanana ny toetran'ny namany Golden Retriever ary ny fahatezeran'ny Cocker Spaniel. '
Lucky (anaram-bosotra Goomba) ilay Golden Cocker Retriever amin'ny faha-15 taonany
Primo the Golden Cocker Retriever amin'ny faha-3 taonany miaraka amin'ny baoliny kilalao
Lucky (anaram-bosotra Goomba) ilay Golden Cocker Retriever 15 taona - hoy ny tompony, 'Tsara tarehy izy ary salama tsara amin'ny taonany. Ny sakafo ankafiziny dia ny bar-b-q ary hitsambikina hiala amin'ny rindrina hatramin'ny misasakalina! '
'Tucker dia andiany faha-2 Golden Cocker Retriever. Nahazo an'i Tucker avy amin'ny mpiompy aho. Izy irery no alika kely fohy tao amin'ny fako. Tsy fantatry ny mpiompy ny antony nivoahany fohy, ka natao fitsapana ADN. Ilay olon-tiany dia ilay sakaizany. Tsy misy fanazavana mitombina ny antony ananan'ny volo fohy, hafa noho ny azy fotsiny! Alika kely tsara izy ary alika kely mahafatifaty. Tena malemy fanahy izy, be fitiavana ary mahafinaritra. '
mastiff sy ny tehina corso afangaro
Hijery ohatra hafa momba ny Golden Cocker Retriever
Golden Cocker Retriever Sary 1
Golden Cocker Retriever Sary 2
alika omby amerikana afangaro pitbull
volamena retriever Malagasy bulldog Mix
Shih Tzu miharo terrier alika kely
inona no Boston terrier voaharo